जनताले रविलाई राजनीतिमा प्रवेस गरी प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा देखाएपछि रविले पहिलोपटक गरे यस्तो घोषणा ! – Life Nepali
जनताले रविलाई राजनीतिमा प्रवेस गरी प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा देखाएपछि रविले पहिलोपटक गरे यस्तो घोषणा !
उनले आफुले के गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा भने खुलाएका छैनन् । तर राजनीतिवाट टाढा पनि जान नसकिने उल्लेख गरेका छन् । लामिछानेले राखेको सानो भिडियो क्लीपमा पनि चितवनमा उनका पक्षमा देखिएको जनमासलाई देखाएका छन् । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनका समर्थकले बधाई दिएका छन् । भिडियोमा प्रतिकृया दिँदै रविलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा देख्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् ।
Previous कुलमानले लोडसेडिङ ह’टाएकोमा विश्व बैंकले गर्यो च’कित पार्ने प्रशंसा !
Next भर्खरै चितवनमा ड’रलाग्दो दु’र्घटना, पाँच जनाको मृ’त्यु !